Uphawu ngesithuthuthu: izinhlobo ezinkulu kanye nezici wokusebenza
Uphawu ngesithuthuthu isungule kakade ngokwaso njengoba izindlela eziphumelelayo ukuze baqede ukweba. Quality uhlelo ngeke nje kubadumaze umhlaseli, kodwa futhi zidonse ukunaka kwanoma abanye.
Electronic Ukuvikelwa ezimbili Wheeler ngokumelene ukweba is evamile ihlukaniswe izigaba eziningana:
Siren - angenze zitha elikhulu ibhiphu. Uma ukuzama ukuyeka imikhankaso "Beep" signal iyakhula, okuyinto umphumela ezingemnandi kakhulu ku kuzwa isela, futhi abedlula ngendlela.
Kwakhala nge-remote control - umsebenzi ngendlela efanayo njengoba ikhambi odlule. Umehluko nje ukuthi kungenzeka Ukukhipha kanye kusebenze buqamama.
Uphawu ngebhayisikili ikhodi uvala - sivala uvala i-lock kuze kube isikhathi lapho umnikazi we ibhayisikili ngeke faka inhlanganisela efanele izimpawu.
Abanikazi amabhayisikili ezibizayo kunconyiwe ku intandokazi imoto ezimbili ezinamasondo ongakhetha multiple ukuvikelwa. Le ndlela yenza umhlaseli isikhathi eside ngokwedlulele lokudlela nge libhayisikili.
Imaphi amathuba ibhayisikili alamu nge elawulwa kude?
Ibhayisikili ithuluzi anti-theft:
Likhipha isignali umsindo, amandla okuyinto on the esengozini nobuhlungu embundwini nxazonke 120 dB.
izilungiselelo Special zikuvumela uyephuza isikhathi Ukusabela isikhathi esithize, kuba ewusizo, isibonelo, endabeni ethola vibration uhlelo ukuthi livela ephambana eduze ezokuthutha zomphakathi. Lokhu kusebenza akasiphoqi umnikazi we ibhayisikili isikhathi ngasinye ukuphendula inhlabamkhosi eyiphutha.
Uphawu ngesithuthuthu akuyona nje nomsindo omkhulu, kodwa futhi ithumela izaziso ukuze ku elawulwa kude, okuyinto uhlale ususondele evela kumnikazi ibhayisikili.
Nemibi anti-theft alamu
Njenganoma iyiphi enye idivayisi elekthronikhi, alamu ohlelweni ngebhayisikili yakho ine yokuntula eziningana. Ngokuyinhloko kuyafaneleka high amandla ukusetshenziswa kwimodi eceleni. Isizathu sokuba wonke isidingo nemishini ekhethekile yokuthungatha nginomdlandla isikhundla kanye nokunyakaza. Ngakho-ke, abanikazi izinhlelo ezinjalo ngokuvamile kufanele umthwalo ngokwakho nge esikhundleni ibhetri.
Amadivayisi abe umsebenzi ukonga amandla, umsindo for 15-30 imizuzwana. Ngokuvamile, uhlelo uyama kancane okwamanje esibi.
Umjikeleto alamu ngempela sengozini izici ezonakalisayo kwemvelo, ikakhulukazi umswakama, izinga lokushisa izinkomba.
Indlela yokwenza i-alamu ngebhayisikili yakho ngezandla zakho?
Okwenza indlela yokuvimbela ukuntshontshwa kwezimoto ezimbili ezinamasondo, akukhona ngempela owazi kahle nezinqe umsakazo. Kuyinto ngokwanele ukuba ubheke izinga eminyango engenantambo, rearranging oxhumana kagesi ukuze idivayisi siyasebenza kuya "wokuvula."
Homemade alamu ohlelweni zingafakwa ekugcineni ingxenye bacabangisise ayo. Ukuze uthuthukise uhlelo kuzovumela ukukhishwa umsindo ejwayelekile-signal elinamandla kakhulu "wezinhlekelele." Ukuletha nomphumela mkhosi onjalo, ngokwanele ukuba isizinda isondo endaweni eqinile. Ngesikhathi umzamo wokuqala ukuhambisa ibhayisikili endaweni uzwa isaziso umsindo okuzokwenza ukuphoqelela umhlaseli ukudabula azibanga ezimnandi kakhulu.
Yiqiniso, wenza i-alamu ohlelweni lwakhe kakusilo njengabantu abaphelele njengoba amasampula endaweni yokukhanda. Ngakho-ke omethembayo kangcono intuthuko professional, ngokuhlanganisa idivayisi sound ukuvikelwa ukukhiywa eqinile futhi uchungechunge.
Uma sikhuluma Indlela engcono kakhulu ukuvikela nokuntshontshwa ibhayisikili, kuyafaneleka ukuba uzicabangele izinto ongakhetha ezikhona ngokusho degree of ukuthembeka, ukusebenza kanye engaba isivinini engenangqondo.
Yeka ukuthi kuyinto alamu ngebhayisikili yakho? Inani isigaba amadivayisi elula isabelomali uzoqala engama-ruble angu-300. Nokho, ibhayisikili abanikazi abakhathazeke ngempela mayelana nokuphepha kwempahla yakho siqu, kufanele sinake izindleko ohlelweni ruble 1000 nangaphezulu.
Njengoba for izici, lapha kwakusho degree of umsebenzi alamu, khona izimfanelo esisebenzayo ngempela. Ngakho, inzuzo enkulu nge uhlelo lokulawula izenzo ukuxhumana libhayisikili ibanga. Ukuhlela idivayisi ukuphendula imiphumela ethize kwenza kube nokwenzeka hhayi kuphela ukuheha baqaphelise umphakathi ngokungabi umzamo ukweba, kodwa futhi ukubeka isela ubuhlungu obungokomzimba. Ngempela, ivolumu kanye nokuvama amaza omsindo in a mkhosi eliphezulu abezindaba ngokuvamile ifinyelela amagugu eziyingozi ukuze kulondolozwe ukuzwa.
Egoqekayo ibhayisikili Stels Pilot 310: Incazelo kanye nezici
"Atom" - ibhayisikili sokuzilibazisa. Ibanga imikhiqizo kanye nokubuyekeza amakhasimende
Cargo emabhayisikili: zokuthutha elula amabhizinisi amancane kanye nabantu
Epee futhi Ucwecwe. Ngokungafani isisetshenziswa esisodwa ukusuka kwenye. Epee, Ucwecwe futhi Saber: yini umehluko?
Female ibhayisikili Stels Miss 5000: incazelo,
Sifaneleka udumo yensimbi Zhaklin stallone
Lo mdlalo "Witcher 3": Ukubukezwa, aphambe
Indlela ukukhetha suit for umkhwenyana emshadweni
Lifters "Chevrolet Niva": isithombe, idivayisi, ukulungisa kanye esikhundleni yezandla zabo
Iphele iKhabhinethi - amabhaktheriya isitha
Fistula ngesikhathi coccyx: izimbangela kanye nokwelashwa